explorer.exe သတ်နည်း — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited March 2009 in Antivirus & Virus
1. explorer.exe ရှိကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
windows + r (run) ထဲမှာ msconfig ကိုရိုက်ထည့်
startup ထဲမှာ explorer.exe ကို check လုပ်ထားတာတွေ့မယ်။
1) ctrl + alt + delete နဲ့ task manager ခေါ်၊ process ထဲက explorer.exe အားလုံးကို end process လုပ်
2) နောက် task manager ထဲက file ထဲမှာ new task(run..) နဲ့ explorer.exe အသစ်ရိုက်ထည့်
3) my computer ထဲက tool/ folder options/ view ထဲ show hidden files and folders ကို check လုပ်ပေး၊ နောက် hide extensions for known file types နဲ့ hide protected operating system files(recommend) ကို uncheck လုပ်ပေး နောက် apply/ok
4) c/windows ထဲက backup (hidden files) ကို delete လုပ်
5) c ထဲက explorer.exe ကို delete လုပ်
6) c/recycle folder(hidden file) ထဲက explorer.exe ကို delete လုပ်
7) c/program files ထဲက explorer.exe ကို delete လုပ်
8) ctrl + r (run) ကိုရိုက် regedit ကိုရိုက် (တချို့ user က administrator မှာမှဖွင့်လို့ရမယ်)နောက် hkey_local_machine/software/microsoft/windows/current version/run (or) hkey_current_user/software/microsoft/windows/current version/run ထဲမှာ explorer.exe ကို delete လုပ်
9)ctrl + r မှာ msconfig ရိုက်ပြီး statup မှာ explorer.exe မတွေ့ပါက ဂန့်သွားပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါ။
p.s တကယ်လို့ အဆင်မပြေပါက reset ပေးပြီး save mode(f8) နဲ့ ၀င်လုပ်ကြည့်ပါ။
( ဒီ virus က memory stick ထဲမှာ အမြဲပါလာတတ်ပါတယ် )
နဲနဲလေးများလွဲနေသလားလို့ဗျာ။ explorcr.exe ဟုတ်ဖူးလား? ကျွန်တော်ကတော့အဲဒါပဲတွေ့ဖူးတယ်။ explorer.exe ဆိုတဲ့ virus တော့မတွေ့ဖူးဘူးဗျ။ ကျွန်တော်မသိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ...
ဇာနည် wrote: »
တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ ထင်တယ်နော်။ explorer.exe ကို ဖြုတ်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တော့မှာလဲ။ သေချာလေး လင်းပါဦးဗျာ...
သူပြောတာဟုတ်ပါတယ်.. explorer.exe ရှိတယ်။ သူ့ icon က zip ဖိုင်ပုံလေး။ ကျွန်တော် တစ်နေရာမှာ ပြောဖူးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက C:\_ အောက်မှာရယ်
C:\_windows အောက်မှာ backup ဆိုပြီး folder လေးတစ်ခုလုပ်ပြီး ထပ်သိမ်းထားသေးတယ်။ သူ့အဖေါ် autorun လေးပါ အတူတူနေတယ်။ အဲဒါကိုပါ ဖျက်ရဦးမှာ။
ဒါပေမယ့် သတ်တဲ့အခါ path ကို ဂရုထားပြီးကြည့်ပေါ့။ အော်ရီဂျင်နယ် explorer.exe နဲ့ မတူပါဘူး။
သရက်မြို့ ဟက်ကင်းဒေးဆိုလား နေမှာပါ..
ဘာ Anti-Virus software အကူအညီ မှ မပါပဲ သတ်ရင် Virus က သေလို့လား .......
သေတာမှ အန်တီဗိုင်းရပ်ထက်တောင် သေချာသေး
spyware တွေဆိုရင် anti spyware software တွေက သတ်ပေမဲ့ တစ်ချို့ spyware တွေရဲ့ code တွေ ကျန်နေသေးပြီး အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးတွေကို bot ဆိုလား ဘာဆိုလား ခေါ်ကြပါသဗျား
ဟုတ်တာမှ သိပ်ဟုတ် explorer.exe ကို zip ပုံလေးနဲ့ပါ၊
msconfig ထဲမှာဆို explorer.exe (c:\_windows\_backup..)ပုံလေးနဲ့ပေါ်နေတာပါ။
zip file ကို ပြချင်တာ ဒီမှာ ပုံဘယ်လိုထည့်ရမလဲ မသိလို့ပါ နောက်ပြီး လက်ရှိကျွနု်ဆီမှာ explorer.exe ပြတ်နေလို့ order မှာထားတာရင် ပြပေးပါ့မယ်။ ပုံထည့်နည်းကိုသာ ပြောပြပါ။
(ဟုတ်ကဲ့ good question ပါ ဒါပေမယ့် fri က ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ ကို သတိမထားမိဘူးထင်ပါတယ်)
မှားဖြုတ်လိုက်ရင်လည်း menu bar တွေပဲပျောက်သွားမှာပါ
စိတ်မပူပါနဲ့ restart မဖြစ်ပါဘူး၊
ဒီအတွက် အဆင့် ၂ မှာ explorer.exe အသစ်ပြန်ခေါ်တဲ့ နည်းကို ရေးထားပါတယ်၊
viruse မပါတဲ့ အစစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်၊
* ဒီအခါမှာမှ backup ကိုဖျက်လို့ရမှာပါ
I just know explorcr.exe
When I saw what you say, I though that It's something wrong.
However, After all that I read, I realize it's lack of my knowledge.
Thanks for your sharing bro.
ဒီ website လေးကို ခဏလောက်၀င်ကြည့်ပေးပါလား ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ backup ကိုဖျက်လိုက်ရင် autorun.exe ပါ ပါသွားပါဒယ်၊
killvbs.vbs, svchost, explorer.exe and thayetmyo hacking day တော်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ကို anti-virus မပါပဲ သတ်လို့ရပါဒယ်၊
ဒါပေမယ့် သရက်မြို့ ဟက်ကင်းဒေး က အသားတွေ့ရပြီး
explorer.exe ကအရိုးပဲရှိတာပါ၊ ဒါပေမယ့် အရိုးကတော်တော်များသဗျ၊
(သြော် ရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ် သရက်မြို့ ဟက်ကင်းဒေးက monitor screen ပေါ်မှာ ပေါ်သဗျ၊
explorer.exe ကတော့ အတွင်းမှာလေ ၀င်လို့၀င်မှန်းတောင်မသိသာဘူး၊ နောက် နေရာတွေ အများကြီးမှာ ရှိဒယ်)
ကျွနု်ပ်ဆီမှာ explorer.exe ကို explorer.0xe, explorer.1xe အသွင်တစ်မျိုးနဲ့တွေ့နေရပါပြီ
thayetmyo hacking days virus ရှင်းပုံလေးအသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ကျနော့်သူငယ်ချင်း HD မှာ c ရောdရော အပြောင်ပဲဗျ။eနဲ့fတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အဖြေကိုစောင့်နေမယ့် ညီငယ်
အဲ့ဒီ virus ရှိတယ်ဆိုတာမယုံကြသူများ ဒီဖိုင်လေး
ကိုဒေါင်းပြီး set up file ကိုrun၍ မိမိစက်ထဲထည့်၍စမ်းသက်နိုင်သည်။(တကယ်သွားမလုပ်နဲ ့နော် ....အနော်လည်းသတ်တတ်ဘူး):Dexplorer.exe virusက winlogon.exe ကို CPU usage 100% နေရာယူခိုင်း ပြီးနှေးအောင်လုပ်ထားလိမ့်မယ်။safe mode ကဝင်လည်းနှေးနေလိမ့်မယ်။ဘယ်programm မှ runလို ့မရအောင်ကိုနှေးတာဗျ။ Task Manager က explorer.exe file ကိုပိတ်လိုက်ရင် programmအားလုံးပိတ်သွားပြီး ဆက်မrunတော့ပါ။မည်သို ့သတ်ရမည်ကိုနည်းလမ်းရှုာမတွေ ့သေးပါ။တွေ ့ကအကြောင်းကြားပါမယ်။
killVBS.vbs နဲ့ svchost manuallly သတ်နည်းလေး နဲနဲ မျှေ၀ပါလား bro